Fiarovam-pinoana, Fiangonana Eran-tany maneran-tany Switzerland (WKG)
"Heveriko fa ilaina amin'ny taratasiko ny hamporisika anao hiady amin'ny finoana nankinina tamin'ny olo-masina ho an'ny Malachi rehetra" (Jodasy 3).
Vao haingana aho dia nijery iray tamin'ireo vola madinika azoko rehefa niova tany Angletera aho ary nahatsikaritra soratra hita manodidina ny sarin'ny mpanjakavavy: »Elisabeth II DG reg. FD. » Midika izany: «Elisabeth II Ny Gratia Regina Fidei Defensor». Io fehezan-teny latinina io dia azo jerena amin'ny vola madinika rehetra any Angletera ary midika hoe voadika: "Elizabeth II, noho ny fahasoavan'Andriamanitra, Queen, mpiaro ny finoana." Ho an'ny Mpanjakavavintsika dia tsy lohateny fotsiny amin'ny lohateny maro hafa izany, fa andraikitra sy apetrak'izy ireo fa tsy dia nitondra zava-dehibe akory izy, fa izay nataony tamim-pahatokiana nandritra ny taona rehetra nijoroany teo amin'ny seza fiandrianana.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny hafatra nentin'ny Mpanjakavavy tamin'ny Krismasy dia notazonina tamina feo kristiana be loatra, miaraka amin'ny anaran'i Kristy ary nalaina tao amin'ny soratra masina teo afovoany ny hafany. Ny hafatra tamin'ny taona 2015 dia noheverin'ny maro ho Kristiana be indrindra satria niresaka ny haizina tamin'ny taon-dasa ary ny fahazavana hita ao amin'i Kristy. Ireo hafatra ireo dia hitan'ny olona an-jatony tapitrisa eran'izao tontolo izao ary ny Mpanjakavavy dia mandray ity fotoana ity hizara ny finoany an'io mpihaino betsaka io.
Mety tsy ho afaka hiresaka olona an-tapitrisany velively isika, nefa misy fotoana ahafahantsika mizara ny sasany amin'ny finoantsika koa. Mitranga ny fiasana any am-piasana na any am-pianarana, amin'ny fianakaviantsika na amin'ny mpiara-monina. Manararaotra ny fotoana betsaka indrindra ve isika rehefa mifoha izy ireo? Tsy antsoina hoe "Mpiaro ny finoana" isika, fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ny tsirairay avy amintsika dia afaka ny ho mpiaro ny finoana raha mizara ny vaovao tsaran'ny nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny tsirairay avy amintsika dia manana tantara tantara momba ny niasan'Andriamanitra tao amin'ny fiainany ary ny fomba ahafahany miasa eo amin'ny fiainan'ny hafa. Mila maheno an'ireto tontolo izao ity tantara ity.
Miaina ao anatin'ny tontolo maizina isika ary te hanahaka ny ohatry ny Mpanjakavavy isika ary hamelatra ny fahazavan'i Jesosy, hiarovana ny finoanay. Ananana io andraikitra io koa isika, dia ny tsy maintsy zava-dehibe. Hafatra lehibe izay tsy tokony avela ho an'ny Mpanjakavavin'i Angletera irery.
Ray ô, misaotra ny mpanjakavavinay sy ny asa fanompoana nanokanana nandritra ny taona maro. Enga anie isika hianatra avy amin'ny ohatr'izy ireo ary ho lasa mpiaro ny finoana amin'ny serivisintsika. Amen.